एमाले नेता पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री भन्छन्- डा.केसीलाई मर्न दिनुपर्छ ! – Online National Network
एमाले नेता पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री भन्छन्- डा.केसीलाई मर्न दिनुपर्छ !
२५ पुष २०७४, मंगलवार ०५:२५
काठमाडाैं, २५ पुस – डा. गोविन्द केसीलाई बचाउनु अावश्यक नभएको भन्दै पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको भनाई सामाजिक संजालहरुमा भाइरल भएको छ । डा.केसीको गिरफ्तारीसँगै मन्त्री अधिकारीको उक्त भनाइ भाइरल भएको हो ।